खाफुन्स्योबाट जोगाउने १० सामाग्रीहरु | Nepali In Japan
खाफुन्स्योबाट जोगाउने १० सामाग्रीहरु
वर्षको सबैभन्दा रमाइलो मौसम हो बसन्त ऋतु । तापक्रम विस्तारै बढिरहेको छ । फुलहरु फुलिरहेका छन् । हामी चाँडै नै जाडो यामको लुगा थन्काएर गर्मीयामको लुगा झिक्ने तयारीमा हुनेछौं ।
तर कसैकसैलाई भने यो मौसममा हे फिभर (खाफुन्स्यो) लाग्छ । बारम्बार हाँच्छियू आउँछ, आँखा चिलाउँछ अनि रुघाखोकी लाग्छ । यस वर्ष हे फिभरको सिजन यस अघिको भन्दा अलि चाँडै शुरु भएको छ । यति बेला परागका कणहरु जापानभर उडिरहेका छन् । यो क्रम मार्चको अन्त्यसम्म रहनेछ । बसन्त ऋतुको एलर्जीसँग लड्न तपाइले आफ्नो डाक्टरबाट पनि प्रेस्क्रिप्शन लिन सक्नु हुन्छ । तर आजको यस लेखमा यो एलर्जीसँग लड्दै यो मौसमको मज्जा लिन तपाइको लागि उपयोगी अनि जापानी बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने हे फिभरसँग लड्न आवश्यक एयर प्यूरिफायरदेखि फेशन मास्कसम्म १० वस्तुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
हे फिभरको तत्कालीन समान चाहिएको बेलामा मास्क तपाइको राम्रो साथी हो । परागलाई स्वासप्रस्वास प्रणालीमा छिर्न नदिन रोक्ने यो तत्कालीन र व्यवहारिक समाधान हो ।
पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सुतिका मास्क वातावरणमैत्री हुन्छन । यसलाई अर्गानिक वा बायो सी बोन वा प्लाजा जस्ता लाइफस्टाइल स्टोरमा किन्न सकिन्छ । घरमै बसेर अनलाइनबाट पनि आफूलाई मनपरेको प्लेटफर्ममा किन्न सक्नु हुन्छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि फाल्न मिल्ने मास्कबाट आफैंले छुट्टयाउनु पर्दछ । तपाइले अर्गानिक सूतिको धुन र पुनः गर्न मिल्ने खालको साधारण चिटिक्क परेको मास्क पनि पाउन सक्नु हुन्छ ।
मूल्यः करीब १ हजार येनदेखि २ हजार ५०० येन
कहाँ किन्नेः अर्गानिक, लाइफस्टाइल स्टोर, अनलाइन
जापानमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा स्थिति यति भयावह भएको छ कि परागको मौसमलाई भनेर पहिला नै डिस्पोजेबल मास्क किनेर राखिएको छैन भने बजारमा मास्क पाउनै गाह्रो छ । केही गरी तपाइले पाउनु भयो भने पिटा मास्क फेशनेबल विकल्पमध्ये एक हो ।
सन् २०१४ मा ल्याइएको यो मास्कले परागलाई मात्रै रोक्दैन, यो स्टाइलिश पनि छ । यो एशियाली बजारमा फेशन नै बनेको छ । हल्का र लगाउन सजिलो यी मास्कहरु नरम अनि तन्किने खालका पोलीउरेथानले बनाइएका छन् । यसले तपाइको आसपास भएका ९० प्रतिशत पराग रोक्न सक्छ । यो मास्क लगाउन सजिलो छ अनि छालाका लागि पनि नरम छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सास फेर्न गाह्रो हुँदैन । पिटा मास्क विभिन्न रंगमा आउँछ । यो महिला, पुरुष अनि बालबालिकाका लागि समेत उपलब्ध छ ।
मूल्यः करीब ३५० येनदेखि ५०० येन
कहाँ किन्ने : औषधि पसल, कन्भेनियन्स स्टोर
२. काफुन ओ मिजु नि खाएरु मास्क
तपाइ नवीन प्रडक्टमा बढी रुची राख्नु हुनछ भने तपाईले यो मास्क लगाउनु पर्छ । यी मास्क डीआरसीले तयार पारेको हो । यो मास्कले परागलाई पानीमा रुपान्तर गर्न सक्छ ।
झट्ट हेर्दा यो सामान्य खालका मास्क भन्दा खासै फरक देखिदैंनन् । तर यो हाइ–टेक मास्क तीन प्रकारमा उपलब्ध छः परागलाई पानीमा बदल्ने सामान्य मास्क (बायाँ), ठूलो मात्रामा परागलाई पानीमा बदल्ने उन्नत मास्क (दायाँ) र पराग एवम् घरमा निस्कने धुलोलाई पानीमा बदल्ने मास्क ।
मास्कमा परिष्कृत यन्त्र छ । मास्कमा जडित सिल्भर टाइटानियमसँग विशेष केमिकल रियाक्शन गरेर मास्कलाई चिसो नबनाइकन सो यन्त्रले फोहोर प्रोटिनलाई पानीमा बदल्छ । अनि टुप्पोमा रहेको चेरी नि ? यसले चाँहि गलामा चिसो महसुस गराउँछ र यो बसन्त ऋतुको लागि उपर्युक्त छ । चाँदीसँग एलर्जी भएकाहरुले भने यो मास्क लगाउनु हुँदैन ।
मूल्यः १ हजार येनदेखि १ हजार ४०० येन (तीन ओटा मास्क भएको प्याकेजको लागि)
कहाँ किन्नेः औषधि पसल, कन्भेनियन्स स्टोर
३. मोरिलाबो खाफुन ब्यारिएर स्टिक
यो रंगरहित लिपस्टिक जस्तै देखिने वस्तु हो । यसको विकास जापानको वन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन संगठनको एक टोलीले गरेको हो । होक्काइदोमा पाइने टोडो प्रजाति सल्लाको ‘एक्सट्र्याक्ट’मा हावाको शुद्धताको प्रभाव धेरै हुने कुरा सो टोलीले पत्ता लगाएको थियो । यसमा तपाइले गर्नु पर्ने एक मात्र काम भनेको स्टिकलाई मास्कको बाहिरी हिस्सामा दल्नुहोस् । अनि एक्सट्र्याक्ट कसरी चमत्कार गरेर पराग रोक्छ हेर्नुहोस् । सल्लाको एलर्जी नभएकाहरुले मात्रै यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको बासना निकै ताजा हुन्छ र ४५ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कहाँ किन्नेः लफ्ट शिबुया, वेल्सिया स्टोर
आइवेयर स्टोर जोफले हे फिभर सिरिजको विशेष चस्मा ल्याएको थियो । यसले आँखालाई पूर्ण रुपमा ढाकेर पराग छिर्न दिँदैन । चस्मा विभिन्न रंग र आकारमा आएको छ । यी चस्मा महिला र पुरुष मात्रै होइन बालबालिकाका लागि पनि छ । यो फेस मास्कसँग जोडा मिल्ने गरी तयार पारिएको छ । त्यसैले हरेक पटक तपाइले सास फेर्दा आँखा अगाडि धुम्म हुँदैन । बालबालिकाका लागि पनि चस्मा पाइन्छ ।
मूल्यः ३ हजार येनदेखि (प्रेस्क्रिप्शन अनुसारका चस्मा, मूल्य ६ हजार येन माथि)
कहाँ किन्नेः जापानभरका जोफ स्टोर
५. खाफुन ब्यारिएर ताइओउ कोट
नाइलन ग्रसग्रेन कोट नानो युनिभर्सले विकास गरेको हो । यसमा पराग कोटको बाहिरै टाँसिन्छ । हेर्दा सरल र्भपनि यसले निकै ठूलो फरक पार्छ । यो कोट छोटो, लामो र टोपी नभएको गरी तीन मोडलमा विविध रंग, आकारमा उपलब्ध छ । यो कोट महिला र पुरुष दुबैका लागि हुन्छ ।
मूल्यः ८ हजार ५८० येनदेखि ११ हजार येनसम्म
कहाँ किन्नेः अनलाइन
६. ब्लु प्योर ४११ पार्किकल प्लस काबर्न एयर प्युरिफायर
ब्लु प्योर नयाँ कम्प्याक्ट एयर प्युरिफायर हो । यले हाइ–ग्रेड फिल्टर प्रविधिको प्रयोग गर्छ । यसले हावामा भएको सबै पराग र भाइरसलाई ३६० डिग्रीबाटै सफा गर्छ । यो प्रयोग गर्न निकै सहज छ अनि सानो कोठा वा क्षेत्रमा राख्न पनि सहज छ । यसले धुँवा र अन्य खालको नमिठो गन्ध मात्रै होइन धुलो, घरपालुवा जनावरको रौं, उलर्जी गराउने तत्व र जीवाणु पनि समात्छ ।
मूल्य : १८ हजार येन प्लस कर
कहाँ किन्नेः योडोबाशी क्यामरा, बिक क्यामरा र अन्य विद्युतीय स्टोर
यो प्रडक्टको नाम झट्ट सुन्दा मध्यकालीन जस्तो लाग्छ । यसमा दूषित हावा सोस्न र सफा गर्न पयाटेन्टेड फ्यानको प्रयोग गरिएको छ । यसले मसिनो भन्दा मसिनो कण समेत ९९ दशमलव ७ प्रतिशत समात्ने दाबी यसका निर्माताले गरेका छन् । नराम्रो गन्ध समेत हटाउँछ । यसको डिजाइन निकै सरल छ अनि जुनसुकै कोठा र आन्तरिक साजसज्जामा समेत उत्तिकै काम लाग्छ ।
८. इहादा अलेर स्क्रिन
यो शिसेइदो मेडिकलले तयार पारेको स्प्रे हो । यसलाई मेकअप, मुहार, कपाल वा शरीरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले पराग र २.५ पीएमका कणसमेत रोक्छ ।
मूल्यः ५० ग्राम (९०० येन), १०० ग्राम (१ हजार ६०० येन)
कहाँ किन्नेः जापानभरका औषधि पसल
९. हाना नोआ नेजल डोच
यो साधारण उत्पादन हो । यसको एक मात्रै लक्ष्य भनेको स्वास फेर्दा नाकभित्र पसेका सबै पराग, भाइरस, धुलो र जिवाणु सफा गरेर हटाउने हो ।यो विशेष बोटलमा पनि आउँछ । यसलाई नाकमा राखेर थिच्दा तरल भित्र जान्छ । यसको प्योग गर्न अलिक समय लाग्छ । हरेक पटक बाहिरबाट घर जाने बित्तिकै यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
मूल्यः ८४० येन
कहाँ किन्नेः औषधि पसल
१०. खाफुन प्लस नोज थ्रोट क्यान्डी
यो क्यान्डीको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको यसमा निकै कडा खालको पुदिनाको धुलो छ यसले सहजै नाक खुलाइदिन्छ । यसले परागबाट हुने एलर्जी रोक्दैन तर सास फेर्दा मुखमा जाने थोरै परागबाट भने तत्कालै राहत दिन्छ ।
मूल्यः करीब २०० येन
कहाँ किन्नेः कन्भेनियन्स स्टोर, सुपरमार्केट र औषधि पसल
तपाइको दिमागमा पनि परागको एलर्जी रोक्ने कुनै प्रडक्टको नाम आएको छ कि ? तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है ।
Prevकोठा भाडा लिंदा थाहा पाइराखे काम लाग्ने कुराहरु
Nextक्लिनिक वा अस्पताल ? जापानमा उपचारका लागि कुनमा जानु राम्रो ?